Kubhadharisa dock yeApple Watch nedhizaina nesimbi isina chinhu Ndinobva mac
Kubhadharisa dock yeApple Watch ine dhizaini nesimbi isina chinhu
Husiku hwakakosha chaizvo huri kuuya mairi, pamusoro pazvose, kugovana kambani uye nenguva dzakanaka nemhuri uye neshamwari. Nekudaro, imwe nzira yekuratidza zvishuwo zvedu zvakanaka ndeyokuita chipo, kunyangwe chiri chidiki zvakadii, chipo chisinga fanirwe kuve chinhu chakakosha, kunyangwe mune ino chiri icho.
Isu tinokurudzira doko reApple Watch uye yeiyo iPhone zvakanyanya, zvakanyanya kukosha uye ndeyekuti ine dhizaini dhizaini, kubva pane yangu maonero. Ini ndinokurudzira iyi pfungwa yekuchaja doko kwete nekuti ndakatenga kana kuishandisa asi nekuti ndiri kutsvaga pamambure mikana yezvishongedzo uye ini ndinopa iwo iwo, mumaonero angu, ari emakwikwi uye ari nani.
Pane ino nguva, chinonyanya kukwezva nezve doko iri hakusi chete kuti inonyatso kuviga tambo yekuchaja induction, ndokuti, tichakwanisa kuisa wachi mukati mayo kuti iite recharge kubva panguva yatinoiburitsa mubhokisi, asiwo dhizaini yacho pachezvayo, yakazara minimalist, inoita kuti ive yakakosha.
Yakagadzirwa nesimbi isina chromed isina chromed uye ine chimiro chinotiyeuchidza nezvetsigiro iyo Apple pachayo inoshandisa muApple Store yayo. Uye zvakare, isu tine kuti iri pachayo maviri kwete chete yeApple Watch asiwo yeiyo iPhone, sezvo mudenderedzwa simbi base iyo iyo paine pane mheni yekubatanidza.
Mutengo wayo, kuva nejaja yeiyo iPhone uye iyo Apple Watch, yakasimba kwazvo uye ndeye chete 19,99 eur0s. Unogona kuona zvimwe zveiyi doko mu inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kubhadharisa dock yeApple Watch ine dhizaini nesimbi isina chinhu
Noel Gallagher naSam Smith vanouya chete kuApple Music
Aya ndiwo maitiro aunogona kudzoreredza ako maAirpods kana iwe ukaona kuti vane chisina kujairika mashandiro